Safari 13 yave kuwanikwa uye zvinoita sekunge hainyatsoshanda | Ndinobva mac
Maawa mashoma apfuura, Apple yakatanga vhezheni itsva yeSafari browser yeMac, mune iyi nyaya mhando 13. Iyi yekuvandudza inofanirwa kuoneka otomatiki pakombuta yako nekukurumidza kana iwe ukaivhura uye zvikasadaro iwe unogona kuiwana iyo zvakananga kubva kuSystem Preferences> kugadzirisa.
Chokwadi ndechekuti havazi vese vanoshanda mushe neiyi nyowani vhezheni yeApple bhurawuza paMac yavo uye ichi chinhu chinoshamisika tichifunga kuti kambani inoyedza vhiki mbiri dzese neyekuyedza browser Safari Technology Preview, zvakadaro Icho chinhu chakatarwa chisingaitike kune wese munhu.
Zvimwe zvinowedzera zvakamira kushanda panguva ino
Iyi vhezheni nyowani inobatawo zvimwe zvekuwedzera izvo zvataive takaisa pakombuta uye ndiko kuti Apple mune vhezheni itsva ye Safari inonyanya kukoshesa kuchengetedzeka uye zvinoita sekunge zvimwe zvacho zvinogona kukanganisa chikamu chakakosha cheMac yedu, uye vakatoyambira kuti mu macOS Catalina zvimwe zvekuwedzera izvi zvinomira kushanda.
Chokwadi ndechekuti mune yangu kesi ndaive nekuwedzeredzwa izvo zvino zvisingashande, izvi ndezvi: Gosthery uye inozivikanwa yeAmazon yekuwedzera camelcamelcamel. Unogona here kugara murunyararo usina ivo? Zvakanaka, zvakajeka hongu, asi zviri pachena kuti kubviswa kwezvakawedzerwa chikamu cheSafari uye vazhinji vevashandisi vezviwedzero vanofanira kuziva ruzivo urwu vasati vavandudza. Kana yako yekuwedzera isingawanikwe muchikamu chekuwedzera cheMac App Store, ramba uchifunga kuti haugone kuiisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Safari 13 yatovepo uye zvinoita sekunge hainyatsoshanda zvakanyanya